Lix ruux oo ku geeriyooday fatahaaddii Wabiga ee Baladwayne – Radio Daljir
Lix ruux oo ku geeriyooday fatahaaddii Wabiga ee Baladwayne
Abriil 29, 2018 7:41 b 0
Lix ruux ayaa ku geeriyooday fatahaadda wabiga Shabelle ee magaalada Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan, sida uu sheegay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Xildhibaanka ayaa sheegay dadka geeriyooday inay ahaayeen dad kasoo jeeday hal qoys.
“Lix ruux oo isku qoys ahaa oo baabuur saarnaa waxaa ku dumay boosaneer, ayaga iyo baabuurkii ay wateen meeshaas ayay ku aasmeen”ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Waxaa sidoo kalle jira barakac iyo burbur khasaare oo ka dhashay fatahaadda wabiga Shabelle iyo roobab mahiigaan ah oo ka da’ay magaalada, lacagihii shilin Soomaaliga ayaa horay uga joogsatay inay ka shaqayso Baladwayne, halka lacagta EVC ee mobilada lagu qaato aanay shaqayneen.
Raysal Wasaaraha Cusub ee Itoobiya oo Booqashadiisii u horaysay ku tagay Jabuuti
Khilaafka dowladda Soomaaliya iyo Imaaraatka oo lagu eedeeyey Qadar